Khasaare ka dhashay Fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle - Wardeeq 24 TV Khasaare ka dhashay Fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Khasaare ka dhashay Fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle
Khasaare ka dhashay Fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle
Wabiga shabeelle ayaa fatahaad ka sameey tuulda Boodaale, oo ka mid ah tuulooyinka hoosyitaga magaalada Jowhar ee Caasimada dowlad gobaleedka Hirshabeelle, ayaa halkaas ka geeystay Khasaaro Nafeed iyo mid hatiyeed oo ka dhashay fathaada Biyaha Wabiga.
Waxaa la soo sheegayaa in Laba Carruur ah ay qadeen Biyaha kuwaa oo mid ka mid ah meydkiisa ay baadi goob ugu jiraan dadka deegaanka, Carruurta geeriyootay ayaa la sheegayaa in da’dooda ay u dhaxeeyso Shan illaa iyo Lix jir.
Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabeelle Maxamed Cumar Ceymooy, ayaa sheegay in xaalda wabiga xiligan ay tahay mid cabsi weyn leh maadma Wabiga uu waddo Biyhii ugu badna suuragalnay ay tahay in deegaano hor leh ay gaarto Fatahaadda.
Ugu Danbeeyntii Wasiirka ayaa ku baaqay in laga qeyb qaato ugurmadka loo sameynaayo dadkii ku barakacay fatahaada Wabiga Shabeelle uu ka sameey tuulada Boodaala.
Previous articleTuug budhcad ah oo lagu Toogtey magaalada muqdisho.
Next articleIiraan waxay ku dhawaaqday xiritaan 6 maalmood ah iyadoo ay sii kordhayaan kiisaska COVID